Ò nwetụla mgbe ị na-echegbu adịkwa niile music si gị iPod ọbụna mgbe akwado ya? Ị maara na iTunes anaghị n'ezie ndabere gị raw music faịlụ? Achọrọ m ịme ka ị a magburu onwe software nke ga-nanị na n'enweghị ndabere gị raw music faịlụ na dị nnọọ a click.
Ụzọ kasị mma ndabere gị iPod music bụ site na iji Wondershare TunesGo. TunesGo bụ ihe dị mfe iji ngwa na a nnọọ mfe interface. Mfe nke ngwa-eme ka ọ dị nnọọ mfe iji mee ihe karịa iTunes.
N'adịghị ka iTunes na ọ bụ nanị Akwadoo elu ozi nke gị music-enweghị music faịlụ onwe ya, TunesGo n'ezie Akwadoo elu gị n'ezie music faịlụ na ihe ọmụma banyere music faịlụ jikọtara. Nke a na-eme ka ọ dị nchebe na ngwá ọrụ akwado gị music.
Upgrading gị iTunes ma ọ bụ gị na kọmputa nwere ike ime ka gị iTunes ndabere ka rụrụ arụ na ya mere eme ka ị hapụ gị music azụ elu gị na music onwe ya. Nke ahụ abụghị ikpe na TunesGo ngwa. Gị ndabere bụ mgbe mma ma ị nweta nkwalite ndị TunesGo ngwa ma ọ bụ na ị nweta nkwalite kọmputa gị. Ị ndabere ga-aga rụrụ arụ ga-anọgidekwa na-abụ dị mgbe ọ bụla ị mkpa iji weghachi ya.
Niile Filiks bụ ndị dị mfe ma dị mfe na-eso ma TunesGo ngwa bụ mfe. Ke ibuotikọ emi m ga-egosi gị otú ndabere gị iPod music.
Ndabere iPod music na Wondershare TunesGo
Nke mbụ niile, ka ndabere na iji Wondershare TunesGo ngwa na mgbe ahụ anyị ga-ahụ otú ndabere na iji nkịtị iTunes n'ọbá akwụkwọ.
Back elu na TunesGo bụ mfe na ngwa ngwa na-eme. Ka malitere na Wondershare TunesGo,
Nzọụkwụ 1: Download na wụnye Wondershare TunesGo ngwa na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2: Ugbu a na-emeghe Wondershare TunesGo na jikọọ na gị iPod na kọmputa site na USB.
Nzọụkwụ 3: Site n'aka ekpe n'akụkụ nke TunesGo ngwa, ị ga-achọpụta aha gị iPod dị nnọọ pịa na ya na ị ga-n'ihu na nkọwa nke iPod.
Nzọụkwụ 4: Pịa na ndabere ka ndabere gị data dị ka e gosiri na foto n'okpuru.
Nzọụkwụ 5: Ị ga-enweta a mmapụta elu window arịọ na ọnọdụ ị chọrọ ịzọpụta azụ elu. Nanị họrọ ọnọdụ ị chọrọ ịzọpụta azụ elu na pịa OK.
Mbupụ ga-amalite na mgbe bụ zuru ezu, ị ga-kpaliri na ọ bụ zuru ezu.
Otu n'ime ihe mere m nke a n'anya software bụ n'ihi na o nwere ọtụtụ ọrụ.
Ọ na-ekwe ka ị na-idetuo music site na ekwentị gị na kọmputa gị ma-enye gị ohere idetuo music nye m a na kọmputa na-na ekwentị gị. Ọ na-emekarị adịghị nkịtị idetuo music si gị iPhone gị na kọmputa, ị pụrụ nanị idetuo music site na kọmputa gị ka gị na iPhone kacha nke oge ma nke a na-eji ngwa na-eme ka o kwe gị omume idetuo music na site na gị iPhone na kọmputa.
Ọ na-akwado android ngwaọrụ na i nwere ike iji gị android ngwaọrụ na iTunes. I nwere ike iche na ọ bụ agaghị ekwe omume iji gị Android ngwaọrụ na iTunes ma na Wondershare TunesGo ọ bụ ike. Ọ na-enye gị ohere iji nkwado ndabere na mpaghara weghachite Android ngwaọrụ. Ọ atọghata music kwesịrị ekwesị format maka ekwentị gị na ọ na-enye ohere transfer n'etiti igwe. Ị nwere ike nyefee gị faịlụ site na android ekwentị ọzọ android ekwentị ma ọ bụ site na iPhone ọzọ iPhone na kwa site na iPhone na android ekwentị na site na android na iPhone. Ị na-ahụ, ọ na-eme ihe dị nnọọ mfe n'ihi na ị.
Ndabere iPod si iTunes n'ọbá akwụkwọ
Nzọụkwụ 1: Iji ndabere na iji iTunes, na-emeghe iTunes jikọọ gị iPod gị PC ma ọ bụ Mac ma ọ bụ Jikọọ gị iPod gị PC ma ọ bụ Mac wee mepee iTunes. The iji ị na-eme, ọ dịghị mkpa. Pịa na iPod na akara ngosi na n'elu aka ekpe n'akụkụ dị ka hụrụ na foto n'okpuru.
Nzọụkwụ 2: Ị ga-ahụ nkọwa nke gị iPod on iTunes. Ugbu a gbadaa na backups na họrọ "Nke a na kọmputa" wee kụrụ "Ndabere ugbu a." Back elu ga-nkeji ole na ole maka usoro iji wuchaa. O nwere ike buru ọbụna awa dabere na ego nke data na ị nwere na gị iPod.
Ị ọma ndabere gị iPod on iTunes Ọbá akwụkwọ na ike iweghachi ya mgbe ọ bụla ị chọrọ. Ma ị azụ elu na TunesGo ma ọ bụ na iTunes, gị data dị nchebe ma nwere ike inweta mgbe ọ bụla ị chọrọ.
Ichekwa ndabere na TunesGo bụ ngwa ngwa karịa akwado na iTunes dị ka ọ na-adịghị mkpa ka mmekọrịta ma ọ bụ detuo ụfọdụ diagnostic data dị ka iTunes eme nke na-ewe oge dị ukwuu. Ọzọkwa, TunesGo Akwadoo elu naanị music mgbe iTunes Akwadoo elu mara mma nke ukwuu na ihe niile dị gị iPod-eme ka ọ na-oge karị ka TunesGo ngwa.
Otú nyefee Data si Blackberry ka iPod
Nyefee Music si Mac formatted iPod ka Windows PC
Olee otú Naghachi ehichapụ iPod emetụ Files na Mac
> Resource> iPod> Dị Mfe na Nchekwa Method nkwado ndabere na mpaghara iPod Music na Otu Click